Android လုလင်: April 2013
Android ဖုန်းတွေမှာ Mp3 နားထောင်ရတာ အသံတိုးနေပါသလား။ အုန်းကနဲ ... အုန်းကနဲ့ မြည်စေမယ့် jetAudio Plus 1.7.0
ရေးတဲ့အချိန် 10:56 PM9comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Missed Call / SMS Alert v3.1.1 Apk Pro
Missed Call / SMS Alert v3.1.1
Overview: Missed Call/SMS Alert app alerts you about the missed calls and SMSes that you might miss for some reason. It is useful if you are inanoisy location or just don’t hear your phone ring at any given time.Buy PRO version if you don’t like ads to be displayed.
Missed Call/SMS Alert app alerts you about the missed calls and SMSes that you might miss for some reason. It is useful if you are inanoisy location or just don’t hear your phone ring at any given time.Buy PRO version if you don’t like ads to be displayed.
- If you ignoreacall , you will be alerted at regular intervals.
- You also have an option to ignore silent mode by which you can decide whether you want to be alerted if your phone is silent
Request you to avoid giving negative feedbacks .In case you feel our app needs any specific improvement or you are facing any issue while setting it up ,please write in to us atsupport.android@hidtechs.com.We would be more than happy to respond.
1. Set alerts for the calls you reject and also for the calls that you dial but are rejected at the other end
2. Also available now is in app purchase option. Thus you can buy individual features of your choice
App now available in holo theme and the user experience improved for easy usage.
Now get Snooze option for the times when you want to get alerted again atalater time
ကိုယ့်ချစ်သူက အမှတ်တရ ပို့ပေးလာတဲ့စာတွေကို မပျောက်မပျက်သိမ်းထားချင်ရင်
ရေးတဲ့အချိန် 9:30 AM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Imei နံပတ် သိရုံ နဲ့ ဘာ ဖုန်း လဲ သိ နိုင် မည့် Android ဆော့ဝဲ
ကဲ ဆောင် ထား သင့် တဲ့ ဆော့ဝ် တစ်ခု လာပြန် ပြီ ။ အဓိက ကတော့ ဆိုင်သမား တွေ အတွက်ပေါ့ ။
ဖုန်း တစ်လုံး ရဲ့ Imei နံပတ် သိရုံ နဲ့ ဘာ ဖုန်း လဲ သိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ - 35***********52 ရိုက် တယ် ဆိုပါတော့ ဖော်ပြ ပေးမှာ ကတော့
Display: TFT 3.7" (480 x 800 )
Dimension: 120.3 x 59.7 x 9.2 mm
weight: 1 15g
Read More ကို နိုပ် ပါ က နောက်ထပ် အများကြီး သိနိုင်မည် ဖြစ်သည် ။
Device type: Telefon
Release date: 2012 r.
Dimensions (h/w/d): 120.3 x 59.7 x 9.2 mm, vol. 66 cm³
Screen: TFT Color (16M) 480x800px (3.7")
Memory card: MicroSD max. 32 GB
Processor: Qualcomm MSM8255
Processor clock: 1000.0 MHz
ဖုန်းခေါ် တဲ့ နေရာ မှာ *#06#ကိုရိုက်ထည့် ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ နံပတ် ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ အဲ့ Imei ရဲ့ ဖုန်း အကြောင်း ဖော်ပြပါမည်။
မရလျှင်ဖုန်း နောက်ကျောက စာရွက် မှာပါသည် ။
google play မှာ ယူလို့ရတယ်ဆို ဒီမှာယူနော်
google က ယူလို့မရတဲ့သူတွေကတော့ 1 mobile ကယူနော်
1 mobile ဆိုဒ်က အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်နော်
ဒေါင်းလော့ဆွဲမယ်ဆို google အကောင့် facebook အကောင့် နဲ့ ၀င်ပြီး ယူနော်
လုလင်ပျိုတော့ အဆင်ပြေ ပါတယ် ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:00 AM2comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
Root Check Pro v1.2.8
Root ရှိမရှိစမ်းတဲ့ App လေးတစ်ခုပါ….
ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App လေးပါ…..
Root Check Pro v1.0.apk
ရေးတဲ့အချိန် 10:14 PM5comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းကို အဝေးက Message ပို့ပြီး စီမံနိုင်မယ့် Android Lost 2.46
Thein Zaw: ကိုပေါက်ခငိဗျား ဖုန်းတစ်လုံးကို software ထည့် အဲဒီထဲမှာ ကြိုက်တဲ့ no ရိုက်ထားပါ။ဖုန်းပျောက်သွားရင် တခြားဖုန်းကနေ စောနရေးထားတဲ့ no ကိုmessageပို့လိုက်ဖွင့်ဖတ်တာနဲပ့အဲဒီဖုန်းက လော့ကျသွားတဲပ software လေး
အဲဒီလို Remote SMS Control Application တွေ တော်တော်များပါတယ်..
စသည်ဖြင့် ထင်ရှားတဲ့ App တွေရှိပါတယ်...
အခု ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ Android Lost လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော် ဒေါင်းထားတာ3လကျော်လောက်တော့ရှိပြီခင်ဗျ... နောက် Update ထွက်ထွက်တော့မသိသေးဘူး.. ကိုသိန်းဇော်တောင်းတာနဲ့ ရှိတာတင်ပေးလိုက်တာ... ဒီကောင်လေးက ရှင်းတယ်..
ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့ Message ကိုတော့ မေ့လို့မရဘူးပေါ့.. SMS နဲ့ ဖုန်းကို လော့ချနိုင်တယ်. Data တွေကို လှမ်းဖျက်နိုင်တယ်.. Flash မီးကို ခဏခဏလင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်.. စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ.. လုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးပဲ...
ကဲ လာပြီနော် ဂိမ်းအလန်းလေး ……..
တကယ်ကို ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါ……
ထွေထွေ ထူးထူးတော့ မပြောပြတော့ဘူး ။ ခုပဲ ယူပြီး ဆော့ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ ………
ရေးတဲ့အချိန် 9:30 AM 1 comment: ရေးသားသူ Android လုလင်
PDA.Net (Version 2.1 တွေကို Computer နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်း)
Version 2.1 တွေမှာ Tethering မပါလို့ စိတ်မညစ်သွားနဲ့နော်…..
ကဲ Download လုပ်လိုက်နော်…
နောက်ဆုံးထွက် v3.50 ကိုလဲဒီအထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်…
32bit နဲ့64 bit နဲ့ပေးထားတယ်နော်…..
Computer မှာ Install ဆွဲလိုက်ပါ။
Auto Install ဆွဲပေးလိမ့်မယ်။
ဖုန်းမှာ PDA.Net ၀င်သွားတာတွေပါလိမ့်မယ်။
Computer ရဲ့ညာဖက်ထောင့် ဘားမှာ PDA.Net ပုံလေးတွေလိမ့်မယ်နော်…
ဖုန်းမှာလဲ Mobile Network ဖွင့်နော်……
CDMA 800 MHz သုံးလို့ရတဲ့ Samsung Galaxy Y CDMA
မန်းဈေးကွက် ထဲကို Samsung i509 Galaxy Y CDMA အမှတ်တံဆိပ် ဟန်းဆက် ဝင်ရောက် လာပါတယ်။
Android 2.3.6 Version သုံးထားတာ ဖြစ်ပြီး ၃ လက်မ၊ QVGA TFT Capacitive Touchscreen အမျိုးအစားလို့ ဆိုပါတယ်။ 2.0 Mega Pixels Camera ပါဝင်ပြီး 600 MHz မြန်နှုန်းရှိတဲ့ CPU ကို အသုံးပြု ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Micro SD ကတ်ပေါက် ပါဝင်တာကြောင့် SD ကတ်ဖြင့် 32GB အထိ ထည့်သွင်း အသုံးပြု နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ Bluetooth၊ Wi-Fi စနစ်များကို အထောက်အပံ့ ပေးပြီး အင်တာနက်ကို 3G စနစ်ဖြင့် အသုံးပြု နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာ ဖောင့်ကိုလည်း အဆင်ပြေ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟန်းဆက် ဝယ်ယူသူများ အတွက် ရေစိုခံ အိတ်လက်ဆောင် ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Samsung Galaxy Y CDMA ကို ဈေးနှုန်း ကိုးသောင်းကျပ် ဝန်းကျင်၊ အဖြူ၊ အမည်း အရောင် နှစ်မျိုးနဲ့ i-TREND IT & Mobile သိပ္ပံလမ်း၊ က.ည.န အနီး၊ ဖုန်း-၀၉-၉၁၀၂၂၂၀၉ သို့ ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 3:27 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
၁၅၀၀ တန် CDMA ဖုန်း ( Android) များအတွက် အင်တာနက် Setting ထည့်နည်း
၅ – Menu Key ( မျဉ်းကြောင်းသုံးကြောင်းထပ်) ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုနှိ်ပ်ပါ
Name – မိမိနှစ်သက်ရာ ( ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါ။ ဥပမာ – mectel )
ဒါဆိုရင် အင်တာနက် setting ထည့်ခြင်းအဆင့်ပြီးပါပြီ။
ရေးတဲ့အချိန် 2:08 PM4comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ပထမဦးစွာ ကဒ်ချိုးပြီး 800Mhz ဟန်းဆက်အတွင်းထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် လိုင်းပေါ်လာအောင် စောင့်ပါ။ လိုင်းတက်လာပြီဆိုလျှင် မိမိနီးစပ်ရာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ခေါ်လိုက်ပါ။ လိုင်းမဝင်သော တီတီတီ အသံကြားလျှင် ပြန်ချလိုက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ခေါ်ပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်ချထားလိုက်ပြီး ခေတ္တစောင့်လိုက်ပါ။
လုလင်ပျို တခြားဆုိုဒ်ကနေ ကူးလာတာပါ ။
ရေးထားတာလေးမှာ ပြောစရာတစ်ခုလိုနေတာကို ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်
တန်ဖိုးနည်း 1500 ဖုန်းကို ငွေဖြည့်မယ်ဆို Mec Tel တံဆိပ်ပါ ငွေဖြည့်ကတ်ကိုဝယ်ပြီး ငွေဖြည့်ရပါမယ်။
အရင်တုန်းက သုံးနေကျ ငွေဖြည့်ကတ်တွေနဲ့ သုံးလို့မရပါဘူး။
တားတားတို့မှာ cdma လိုင်းမကောင်းလို့ ၀ယ်ထားဘူး
ငွေစစ်တဲ့ ကုဒ်နံပါတ်က *123# ပါတဲ့ ခင်ဗျာ
ရေးတဲ့အချိန် 2:04 PM No comments: ရေးသားသူ Android လုလင်
ဖုန်းထဲကအချက်အလက်တွေကို PC မှာသုံးမယ်
ကနေ Websharing Lite ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ
ပြီးရင် အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ ဖုန်းထဲမှာ Websharing ကိုဖွင့်ပြီး menu မှ setting ကိုလိုအပ်သလိုပြန်င်လိုက်ပါ အဲ့အခါ Website လိပ်စာနဲ့ဆင်တူတဲ့ IP Address ရမှာပါ ဥပမာ-http:/10.0.1.1.2112/ ဆိုတာမျိုးပါ ဒီအဆင့်မှာပဲ ကိုယ့်ဖုန်ထဲကဖိုင်တွေကို စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Password ကိုထည့်သွင်းရမှာပါ
အဲ့အဆင့်ပြီးရင်တော့ကွန်ပျူတာကနေသုံးလို့ရပါပြီ စောစောကရထားတဲ့ IP ကို Browers တခုခုမှာဖွင့်လို့ရပါပြီ အဲ့မှာ Password တောင်းတဲ့အခါ ခုနာကဖုန်းတထဲမှာပေးခဲ့တယ် pass ကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ ဖုန်းမျက်နှာပြင်သေးသေးလေးတွေကိုအသုံးပြုရတာအားမရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေပါစေဗျာ
ရုံးရောက်ရင် ဖုန်းက silent လုပ်ထားတော့ တစ်ခါတစ်လေကျ Missed Call တွေ အများကြီးဖြစ်တာတို့ Message တွေ ရောက်နေတာ မသိတာတို့ ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။
ဒီတော့ Android Phone ကို PC နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ Notification တစ်ခုခုတက်ရင် PC ကနေ Notification Area မှာ အသိပေးအောင် ဒီလိုမျိုးလေး လုပ်ထားရင် မကောင်းဘူးလား။
ဒီ Application လေးက ထွက်ခါစဆိုတော့ ကျွန်တော် Market အပြင်ကနေ လင့်တွေလိုက်ရှာတာ မတွေ့ဘူးဗျ။
ပြီးတော့ ကျွန်တော့ဖုန်းက Market ဝင်မရတော့ ဒေါင်းပြီး ပြန်ပေးလို့လည်း အဆင်မပြေဘူးလေ။
အဲဒါကြောင့် Market Link လေးပဲ ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
*ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေတဲ့သူများကလည်း ဒေါင်းပြီး mediafire ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်က comment box မှာ ပြန်ပြီး share ပေးခဲ့ကြပါဗျာ ... နောက်လူတွေလည်း အဆင်ပြေတာပေါ့*
ကဲ ဒါကတော့ DeskNotifier For Android ပါ
>> Download DeskNotifier For Android << (Google Play)
ဒါကတော့ PC Installer ပါ။
>> Download DeskNotifier Windows Applications << (437 KB)
အကုန်ဒေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် Phone နဲ့ PC ကို USB ဒါမှမဟုတ် WiFi ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းနဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ Screenshot လေးတွေပါ
ဒါက PC အတွက်
Connect လုပ်နည်းကတော့ မခက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မပြတော့ဘူးနော်။
Android ဖုန်းတွေမှာ Mp3 နားထောင်ရတာ အသံတိုးနေပါသလာ...
Imei နံပတ် သိရုံ နဲ့ ဘာ ဖုန်း လဲ သိ နိုင် မည့် And...
၁၅၀၀ တန် CDMA ဖုန်း ( Android) များအတွက် အင်တာနက် ...
How to receive Android notifications & text messag...
U8825D ရဲ့ power ပိတ်ပြီး အားသွင်းရင် CWM recovery...
Google Play က App တွေကို PC ကနေဒေါင်းကြမယ်
China Android Phone ကိုင်ပီး တရုတ်စာ မဖတ် တတ် သူမျ...
Samsung ဖုန်းတွေ download mode ၀င်ရတာ အဆင်မပြေသူမျ...
Google Play မှ App & Game များကို PC သို့ တိုက်ရို...
အမြင့် ဖုန်းတွေနဲ့ တတ်ပလက် များကို apk ဖိုင်ဖြင့်r...
samsung all in one usb driver လေးပါ
Samsung Message Error ရှင်းနည်း
Zawgyi-One Flipfont (For Galaxy Series)
Fake You Apk 4MB Direct Downlod
WiFi Pass Recovery & Backup v3.7 Apk 888KB Direct ...
Pattern Lock ကျနေသူများအတွက် အလွယ်ပြန်ဖြည်နည်း
Voice Translator Pro for Android
ဖုန်း ရဲ့ အင်တာနက် ကို Bluetooth ဖြင့် ကွန်ပြူတာ န...
Twin Me! ( နှစ်ကိုယ်ခွဲပြီး စရိုက်နှစ်မျိုးနဲ့ လန်...
Android Recycle Bin PRO v1.0 Apk 10MB
Galaxy S4 Ringtone Gallery
“ Mini Tools v 1.0 ”
Android မှာ Sexy Girl တွေနဲ့ စကားပြောကြမယ်
Samsung Galaxy S4 (Android 4.2.2) Firmware ရပြီနော...
Android ဖုန်းကနေ ရှေးခေတ် လှည့်ဖုန်းလို နံပတ်လှည့်...
Grand Theft Auto III UNCUT -V-1.3-(ကားသူခိုးဂိမ်း)...
Play Store မှဆော့ဝဲလ်များကို PC မှ ဖုန်းပေါ်သို့ တိ...
Crazy Fish ( Live wallpaper + Game )
မည်သည့်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ဗွီဒီယိုကိုမဆို Downloa...
Ultimate Backup Pro v3.0.0 Apk
မြန်ကလိလို na kaung lar လို့ ရေးရင် မြန်မာလို နေေ...
ဘာသာပြန်မယ် နားထောင်မယ် Google Translate 2.6
MMETE Myanmar File Manager For Android OS လာပါပြီဗ...
android မှာVideo Live Wallpaperတင်မယ့် Video Live ...